သံတွဲ က တာဝန်ယူမှု ???????? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သံတွဲ က တာဝန်ယူမှု ????????
သံတွဲ က တာဝန်ယူမှု ????????
Posted by Kaung Say Chin on Oct 19, 2012 in Copy/Paste |4comments
ခေါင်းဆောင်မှု ရဲ. နောက်မှာ တာဝန်သိမှု၊ တာဝန်ယူမှု၊ ပွင်.လင်းမြင် သာတဲ. စီမံခန်.ခွဲမှု၊ မ်ိမိ တာဝန်ခံ ထားတဲ. လူထုရဲ. ဆန္ဒ နဲ. မေးမြန်း မှုများကို အချိန်မှီ အရေးတယူ ပြန် ကြားဘို. စတာ တွေဟာ အရေး ပါ တဲ. အချက်တွေပါ။ ယခု သမတ ကြီး လုပ်ဆောင် နေတာတွေပါ။
ဥပမာ တစ်ခုကတော. သံတွဲ နယ် က ၁၄၄ အမိန်. ပါ ဘဲ။ စာနယ်ဇင်းတွေက တော. သံတွဲနယ် မှာ ၁၄၄ အမိန်. ကို ထပ်မံ သက်တန်းမတိုး တော. ဘူ ဒါ ကြောင်. ၁၄၄ အမိန်. ဟာ ရုပ်သိမ်းပြီ လို. ဖေါ်ပြကြပါတယ်။ အဲဒါအမှန်ဘဲလား????? အမှန်ဆိုရင် ……ဒါပေမဲ. သက်ဆိုင်ရာ ကတော. ရုပ်သိမ်းတဲ. အမိန်.ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိ သေးပါ ဘူး။ လူထု က သိချင် မှာ ပါ ဘာကြောင်. မရုပ်သိမ်း ရ တာ လဲ၊ ဘယ်လို အကြောင်းတွေ ကြောင်.လဲ၊ ဘာတွေမငြိမ်သက်လို.လဲ၊ ခုတော. ဘာဆို ဘာမှ သိခွင်.မရ သလို၊ မေးခွင်.လဲ မရပါ၊ ပွင်.လင်းမြင်သာမှု လုံးဝမရှိပါ။ လူထုရဲ. ဆန္ဒ ဘယ်လိုရှိမယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပေမဲ. လဲ အရေးယူမှု ၊ ပြန်ကြားမှု လုံးဝ မရှိပါ။ သမတ ကြီး သွားချင်တဲ. လမ်း နဲ. တော. မတူပါ။ မေးခွန်းထုတ်စရာပါ ????????
ဒီမိုကရေစီလူ.ဘောင်မှာ လူတွေကိုတန်ဘိုးထားပြီးဆက်ဆံရမှာ ပါ။ လုံခြုံ ရေ မရှိ ဘူးဆိုပြီး စိုးရိမ်လောက်တဲ. မငြိမ်သက်မှု မရှိ ဘဲ၊ တာဝန်ယူမှု မရှိဘဲ၊ တိရစ္ဆာန်တွေလိုလှောင် ပိတ်ထားရုံ နဲ. လူထုရဲ. စိတ်ခံစားမှု နဲ. သဘောထားကို ရုပ်ဆိုးအောင် ၊ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း ကို အယုံအကြည် မရှိအောင်လုပ် ကြမှာ လား ???????? လိုအပ်တဲ. အရေးယူ မှု ကို အချိန်မီ မဆောင် ရွက်ခဲ.လို. ကျောက်နီမော် ကစတဲ. ပြသနာ ဟာ တောင် ကုတ် နယ် ကို ရောက် ခဲ.ပြီ မဟုတ်ပါ လော ???????
ကောင်းစေချင်က လည်း ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ မေးပါလား ။ ဘာဖြစ်လို့ သိချင်တာလည်း ။အခုထွက်လို့ မရ ဖြစ်နေလို့လား ။
အဝေးမှာ ရှိတဲ့ ကျွန်တော်တောင် သိရသလောက် ညထွက်လို့ ရတယ် ။ မဖမ်းတော့ဘူးလို့ သိရပါတယ် ။ အဲ ဒါပေမဲ့ ဟိုတယ် သမားတွေက ဒီရုပ်သိမ်းတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကို ထုတ်ပြန်စေချင်တယ် ။
အဲ့ဒီ့ထုတ်ပြန်ချက် တောင်းပေးမှ တိုးအေးဂျင့်တွေက ရောင်းပေးရဲမယ် ။ ဧည့်သည်လည်း ရဲရဲလာရဲမယ် ဆိုပြီး ခယက ကို ရုတ်သိမ်းစာ ထုတ်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံ ကြတယ် လို့ သိရပါတယ်။
ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်က ခယက က တာဝန်ယူရင်ထုတ်ပြန်ပါလို့ ပြောကြောင်း ကြားသိရပါတယ် ။ ခယက ကလည်း တာဝန်ယူပြီးတော့ ဘယ်ထုတ်ရဲမလဲ ။ ထုတ်ပြီးမှ ပြန် ထလာရင် ပြန်ထိမ်းရခက်မှာ ကြောက်တော့ မသိမသာ နဲ့ဘဲ လွှတ်ထားမှာပေါ့ ။ ဧည့် လာတာ မလာတာ သူ ဘယ်ဂရုစိုက်မလဲ ။ မလာရင် ပိုတောင်ကြိုက်ဦးမယ် … :hee:
ဘယ်ကောင်က ( Deleted by Mod –6) စကားပြော မလာကောင်းရအောင် မင်းကကမ်းခြေကိုမှီလုပ်စားနေတဲ့
ကောင်မဟုတ်ဘဲ။သံတွဲက ခယကတို့ မယက တို့ အထူးလုံတို့ လိုကောင်တွေအားလုံး
မျက်လုံးမှိတ် ( Deleted by Mod –6) မျိုးချစ်ကောင်တွေ ကိုယ့်ရပ်ကိုယ်ရွာတွက် လုပ်တယ်နာမည်ခံ။
( Deleted by Mod –6) ဦးဆောင်ဆန္ဒပြမယ်
ထားနေပြီ။အဲ့တော့ တောင်ကုတ်လို ကုလားသတ်ရင် ကုသိုလ်ရတယ် မှတ်ပြီး ( Deleted by Mod –6) ကို ကန်တော့
နေတဲ့ကောင်တွေ ကိုမဖမ်းမဆီး ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခိုင်းထားတယ်။အေး မင်းတို့ မှတ်ထား ဥပဒေ
စိုးမိုးခြင်း မရှိသေးလို့ လုပ်ခြင်တာလုပ်ကွာ။တနေ့ မြေပုံပေါ်ကပါ ပျောက်သွားမယ်။ဆန္ဒဖော်တဲ့
ကောင်တွေ လက်သင့်ခံတဲ့ကောင်တွေ ( Deleted by Mod –6) ကြ။
ဇောင်းတဂျွဂျွ နဲ့ ဒင်းတော့လား
သို့ သွားပါ အသင်
ဒေါက်တာ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဋိတ ဥသျှောင် သင်းကျိတ် မကိဋ်သရဖူ says:
ဟေ့ကောင် ( Deleted by Mod –6)